Uchungechunge Olugqugquzelwe yi-'The Shining 'e-odwe nge-HBO Max
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Uchungechunge Olugqugquzelwe yi-'The Shining 'e-odwe nge-HBO Max
by Waylon Jordan April 16, 2020 897 ukubukwa
I-HBO ikhipha zonke izitobhi zokuqukethwe okusha kwe-HBO Max yayo ezayo, isiteji sokusakaza esizokwethulwa ngoMeyi 2020, futhi ngokusho Okuhlukahlukene, lokho kuzofaka uchungechunge olusha olususelwa ku- The Shining okubizwa ngokuthi Ukubuka.
Umbukiso uzokhiqizwa nge JJ Abrams nenkampani yakhe iBad Robot Productions.
Ukubuka kuzobikwa ukuthi uzohlola izindaba ezingachazeki zehhotela i-Overlook njengoba zilotshwe nguStephen King encwadini yakhe yango-1977, The Shining. Le noveli igxile emndenini othathe umsebenzi wokunakekela umnikazi wehhotela phakathi nezinyanga zasebusika. Kodwa-ke, ngokushesha bathola ukuthi ihhotela lelo Soze kungahlali muntu.
Kungenzeka, omunye wemisebenzi edume kakhulu yeNkosi emkhakheni we-career oveze ama-classics amaningi. Ube eseka le noveli kulomlando futhi kubikwa ukuthi uhlasele iStanley Hotel edolobheni elisentabeni i-Estes Park, eColorado.
Lokhu kungenye nje yochungechunge i-Abrams neBad Robot ekhiqiza insiza yokusakaza. Basebenza futhi Ubulungiswa buvuza Ubumnyama, Futhi idasta, uchungechunge lwedrama lokuqala.
I-HBO Max ihlelelwe ukwethulwa ngenyanga ezayo ngekhathalogi enkulu yemibukiso nama-movie kanye nokuqukethwe koqobo konke nge $ 14.99 ngenyanga, intengo efanayo nokubhaliselwe kwe-HBO Go kwamanje. Ababhalisile asebevele babhalisele i-HBO Go, bazokwazi ukukhuphukela ku-Max ngosuku lokwethulwa.
Ingabe ujabulile ngokubona kwalolu chungechunge? Sazise ukuthi ucabangani kumazwana!